Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Misokatra ho an'ny besinimaro androany i Universal Beijing Resort
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Kolontsaina • Entertainment • Films • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • People • Resorts • Theme Parks • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Amin'ny maha tetik'asa fampidiram-bola vahiny lehibe an'ny indostrian'ny serivisy any Beijing, antenaina hampisondrotra ny fananganana an'i Beijing ho ivon-tsakafo iraisam-pirenena ity toeram-pialofana ity ary hanamafisana ny fahatokisan'ny kolontsaina sy ny indostrian'ny fizahan-tany any Shina eo afovoan'ny valanaretina COVID-19.
Ny Universal Beijing Resort, izay lehibe indrindra amin'izao fotoana izao, nanokatra ny besinimaro tamin'ny alatsinainy.
Ilay toeram-pialofana, mirefy 4 km toradroa, dia misy ny valan-javaboary Universal Studios Beijing andrasana fatratra, ny Universal CityWalk, ary ny hotely roa.
Misy 37 ny fialam-boly fialam-boly sy ny manintona manan-tantara, ary koa fampisehoana fialamboly 24.
Nisokatra ho an'ny besinimaro ny besinimaro lehibe indrindra manerantany tamin'ny alatsinainy teo tao amin'ny Distrikan'i Tongzhou ao Beijing, izay ipetrahana ny Ivotoerana fitantanan-draharaha ao Beijing.
Ny Universal Beijing Resort, amin'izao fotoana izao no lehibe indrindra amin'ny sehatra manerantany, no valan-javaboary Universal Studios fahadimy manerantany, ny fahatelo any Azia, ary ny voalohany any Shina.
Ilay toeram-pialofana, mirefy 4 km toradroa, dia misy ny valan-javaboary Universal Studios Beijing andrasana fatratra, ny Universal CityWalk, ary ny hotely roa. Mampanantena izy io fa hanome mpitsidika traikefa amin'ny fitsidihana lalina, miaraka amin'ny tany misy lohahevitra fito izay manarona fotoam-pialam-boly 37 sy toerana manintona ary koa fampisehoana fialamboly 24.
Ny fanokafana ny Universal Beijing Resort nifanindry tamin'ny fialantsasatry ny Fetin'ny Fahavaratra tamin'ity taona ity izay manomboka amin'ny 19 septambra ka hatramin'ny 21 septambra.
Miantehitra amin'ireo fananana ara-tsaina malaza eran-tany toa ny Transformers, Minion, Harry Potter ary World Jurassic, ny Universal Beijing Resort dia nahasarika mpizahatany an'aliny nandritra ny fitsarana tamin'ny voalohan'ny volana septambra.
Amin'ireo tany misy lohahevitra fito an'ny resort, Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers Metrobase ary WaterWorld dia natsangana manokana ho an'ireo mpizahatany sinoa.
“Roa taona sy tapany monja ny fanamboarana. Ny fampiasàna ny haitao avo lenta sinoa dia nampitohy ny vanim-potoana fanamboarana », hoy i Wang Tayi, tale jeneralin'ny Beijing International Resort Co., Ltd.
Tamin'ny taona 1990 tany ho any dia nitady fivoarana isan-karazany ny indostrian'ny fizahantany i Beijing, raha ny orinasa amerikana Universal Parks & Resorts kosa nitady fotoana hidirana amin'ny tsena sinoa.
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2001, ny governemanta monisipaly Beijing sy ny ankolafy Etazonia dia nanao fifampiraharahana momba ny fananganana ny tetik'asa Universal Resort any Beijing. Tamin'ny volana Oktobra tamin'io taona io dia nanao sonia taratasy fikasana momba ny fiaraha-miasa izy ireo.
Taorian'ny fankatoavana ny tetikasa tamin'ny 2014, Beijing International Resort Co., Ltd., fiaraha-miombon'antoka China-US miaraka amin'ny fananana ny toeram-pialofana, dia natsangana tamin'ny Desambra 2017. Nanomboka tamin'ny Jolay 2018 ny fananganana ny Universal Beijing Resort.
Araka ny voalazan'i Yang Lei, lefitry ny talen'ny distrikan'i Tongzhou ao Beijing, dia mihoatra ny 35 miliara yuan (manodidina ny 5.4 miliara dolara) ny fampiasam-bola amin'ny fananganana ilay toeram-pialofana.
Tamin'ny tampon'ny asa fanamboarana ny volana jolay 2020, nahatratra 36,000 ny mpiasa nihazakazaka nanohitra ny fotoana mba hahazoana antoka ny fanamboarana ao anatin'ny valanaretina COVID-19.
Vita ara-potoana ny fanamboarana ireo tranoben'ny Universal Beijing Resort tamin'ny taona 2020. Nanomboka fitsapana adin-tsaina ny toeram-pivarotana tamin'ny Jona 2021 ary nanomboka fitsarana ny 1 septambra ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny besinimaro tamin'ny 20 septambra.